လိင်မှုဆိုင်ရာအရသာသည်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများလား။ (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
အပ်ဒိတ်: Porn အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အရှိန်မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် Habituation ရှာဖွေခြင်း
YBOP မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ငါ၏အ fetish porn-သွေးဆောင်လား?
"သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားအများစုသည်လိင်ဆန္ဒများ၏ရင်းမြစ်သည်ယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ပါ၊ -Leon အက်ဖ် Seltzer
ဟုတ်ပါတယ်, လိင်အင်္ဂါအတော်လေးမကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ကိုပညတ်မပါဘဲတက်မီး။ သေး သုတေသီများပြခဲ့ကြ နို့တိုက်သတ္တဝါများအေးစက်နိုင် (နှင့်တခါတရံ reconditioned) အံ့သြစရာလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိဖို့။ တောင်မှလူသားမြားသငွေကြေးဆိုင်ရာအားဖြည့်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်သင်ကြားပို့ချတုံ့ပြန်ချက်ကိုပူဇော်သောအခါအဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ penile စိုက်ထူသို့မဟုတ်အင်္ဂါဇာတ်သွေးခုန်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်ဖိနှိပ်ဖို့စီမံကြပါပြီ။
အမှန်စင်စစ်ကျွန်တော်တို့အများစုကကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ (ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းတိမ်းညွတ်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ကဲ့သို့) ကျော်သွယ်ဝိုက်ပြောကောင်းတစ်ခုနည်းနည်းရှိသည်။ ဦးနှောက်ပလပ်စတစ်ဖြစ်ကြသည်။ အမှန်တရား ကျနော်တို့ကအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်လေ့ကျင့်နေကြ-with သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲ။ ကျွန်တော်တို့သည်အကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်နှင့်အထူးသဖြင့်လမ်းညွန်၌အကြှနျုပျတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအခြေအနေကြောင့်လှုံ့ဆော်မှု၏လိုက်စားငြိမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်များစွာသောငယ်ရွယ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် သူတို့ရဲ့လိင်သဘာအခြေအနေ pixel to - ထိုကဲ့သို့သောသူတို့သည်စစ်မှန်သောအလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်များ (သူတို့၏ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ) ကြောင့်နှိုးဆွခြင်းမခံရစေရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်မိမိတို့၏ပင်ကိုလိင်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများနားမလည်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့်အပြင်းအထန်ပြောင်းလဲနေကြသည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသူများအတွက်လိင်အရသာကိုပြောင်းလဲစေသောဤဖြစ်စဉ်သည်လုံးဝသုတေသနပြုထားပုံမရသောကြောင့်“ သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအများစု” သည်လက်ရှိအချိန်တွင်ဆိုးဆိုးရွားရွားပြောင်းလဲသွားသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအလှနျ re-အေးစက်နိုင်အကြံပြုချက်သက်သက်သီအိုရီမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးကအထီးကြွက်မှအေးစက်နိုင်ပါသည် တစ်ဦးလိင်တူချင်းမိတ်ဖက်ပိုနှစ်သက် မိမိအ dopamine တက် jacking အားဖြင့်။ ပြီးတော့သိပ်မကြာပါဘူး သုတေသီများသည်ကြွက်တုံးအား dopamine agonist (dopamine တုပသည့်ဆေး) ဖြင့်ထိုးသွင်းပြီးနောက်အခြားအထီးတစ်ကောင်နှင့်လှောင်အိမ်ထဲထည့်ခဲ့သည်။ ကြွက်နှစ်ကောင်သည်တစ်ရက်တည်းအတူတူနေခဲ့ရသည်။ (dopamine agonist သည်တစ်နေ့ခန့်တွင်စနစ်မှပြတ်သွားသည်။ ) သုတေသီများက ၄ ရက်ခြား။ ၂ ကြိမ်ထပ်မံပြောဆိုခဲ့သည်။
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် reconditioned အထီးစမျးသပျခဲ့သညျ။ မိမိအမှုစနစ်မ dopamine agonist နှင့်အတူသူသည်မိမိအအထီးရဲ့ buddy နဲ့အခြားကြွက်ကို (dopamine ကသူ့စနစ်၏ထွက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုမှတ်မိ) နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူလှောင်အိမ်သို့ထားရှိခဲ့ပါသည်။ အများဆုံးအပေါ်သူ့ကိုလှည့်အရာကြွက်ခန့်မှန်း? သူကသူ့ရဲ့ buddy ဖို့ပိုပြီးတုန့်ပြန်ပြသခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာသည်ရဲ့ buddy ကိုလည်း conditional ကြွက်တစ်ကညာခဲ့ပါလျှင်သူ့လူမှုရေးဆှဖှေဲ့သရုပ်ပြခဲ့သည်။
အကယ်၍ buddy ဟာလိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကြွက်ဖြစ်ခဲ့ရင်အေးဆေးအပျိုစင်ကယောက်ျားလေးရဲ့အပြုအမူကိုဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါစစ်ဆေးခြင်း၊ သုတေသီများကသူမကြွက်ကိုလိင်တူချစ်သူများမဟုတ်သောကြောင့်အခြားကြွက်ကိုမကြိုးပမ်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးသူကျိန်းသေပြောင်းလဲသွားတယ်ခဲ့သည်။ (လူကြီးများသည်လူငယ်များ၏ပင်ကိုလိင်အပြုအမူကိုမည်မျှအလွယ်တကူလွှမ်းမိုးနိုင်ကြောင်းဤသက်သေသာဓကလား။ )
စိတ်ဝင်စားစရာကဒီကြွက်ကြောင်တွေကိုအမျိုးသားများသာသာဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင်စမ်းသပ်မှုကိုင်တွယ်မှုအားလုံးရပ်တန့်သွားပြီး ၄၅ ရက်အကြာမှာအတုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုကအငွေ့ပြန်ပြီးယောက်ျားတွေဟာသူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုမနှစ်သက်ကြဘူး။ ဒါကအထောက်အကူပြုသလား။ ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများအပြီးဘာကြောင့်ရှင်းပြတာလဲ ရပ် dopamine-ပြုစုပျိုးထောင် porn နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ fetishes အားဖြည့်, သူတို့ကမကြာခဏသူတို့ရဲ့ကြောင်းသတင်းပို့ fetish porn အခိုးအငှေ့ဖွစျအရသာ?
သင်ခန်းစာကို? dopamine ၏မြင့်မားအားကောင်းဦးနှောက် rewire နှင့်လိင်အရသာပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ (ပိုမကြာသေးမီက, သုတေသီများပြခဲ့ကြ ထပ်ခါတလဲလဲထိုးဆေးများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်လည်းရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်အမျိုးသားများအတွက်အခြားယောက်ျားများကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းလက်ခံခဲ့သည်။
အလားတူစွာဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပါ နိုင် သငျသညျ excites porn အမျိုးအစားကိုပြောင်း။ Desensitized porn အသုံးပြုသူများကို (အနိမ့် dopamine အချက်ပြ) ဘာပဲသူတို့ရဲ့အလံ dopamine တက် Jack ပါလိမ့်မယ်ကိုရှာ။ သူတို့က, dopamine spikes တွေ့များနှင့်ပြန်လည်အေးစက်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်နေပြီပြီးတာနဲ့။ သူတို့အသစ်ကအမျိုးအစားမှ masturbating စောင့်ရှောက်လျှင်, သိမ်မွေ့ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦးအမှတ်တမဲ့နှင့်မကြာခဏစိုးရိမ်ဖွယ်ရာမှဦးဆောင်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆားကစ် rewire, အစောပိုင်းကအရသာမှထှတျအထိပျဖို့, ကခက်ခဲ, ဒါမှမဟုတ်ပင်မဖြစ်နိုင်စေ porn အရသာအတွက်ပြောင်းပေးပါ။
တစ်ချိန်တည်းတွင်ညစ်ညမ်းသောရွေးချယ်မှုများသည်“ ယဉ်ကျေးမှု” ထက်“ သဘာဝ” ဖြစ်သည်ဟုအခြေအမြစ်မရှိပြောဆိုခြင်းသည်ကျယ်ပြန့်သောကိုယ်ခန္ဓာကိုလျစ်လျူရှုထားသည် မျိုးစုံယဉ်ကျေးမှုများမှသက်သေအထောက်အထား အကြောင်းကိုလူမှုရေးအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အေးစက်။ စိတ်ပညာရှင် Kirk Witherspoon ကရှင်းပြသည်:
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနှင့်အချိန်နှင့်အမျှလိင်ဆိုင်ရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုအားလုံးသည်တစ်နေရာရာတွင်“ ပုံမှန်” ဟုသတ်မှတ်ထားသည့်အကျယ်ပြန့်ဆုံးပြောင်းလဲမှုများကိုသိရှိခဲ့သည်။ ... ပုံမှန်ဟုယူဆထားသည့်အရာတွင်ကြီးမားသောသင်ယူ (ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း) အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲပင်ကိုသဘာဝ (သဘာဝ) ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိသည်။ သာဓကအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်အကဲဖြတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများစွာသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့အခြားကလေးများနှင့်ဖြစ်စေ၊ လူကြီးများနှင့်ဖြစ်စေလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံရသည်။ အခြားသူများကမူပိုမိုဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုဖြစ်နိုင်သည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုတွင်“ ပုံမှန်” ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ညစ်ညမ်းသောအရသာများသည်“ ပင်ကိုစရိုက်” သို့မဟုတ်“ မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများ” ဟုယူဆရန်သတိပြုသင့်သည်။
ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်“ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်” နှင့်“ ပြောင်းပြန်ပြန်လှန်” နှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားရန် ပို၍ တိကျသည်။ ရှည်လျားသောလုံလောက်သောအချိန်အပိုင်းအခြားများ (သို့) အထိခိုက်မခံသောကာလများအတွင်းထိတွေ့မှု၊ တတျနိုငျသ အနည်းဆုံးအားလူအခြို့အတွက်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဦးစားပေးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ ဒါ့အပြင်အစောပိုင်းကာဆွဲဆောင်မှု-ပုံစံပိုပင်-ပေုံ, ဒါမှမဟုတ်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများသာတည်တတ်၏, ကဖြစ်လိမ့်မည်။
သို့သော်“ ပြောင်းပြန်လိင်ဆက်ဆံမှုအခြေအနေ” သည်ယနေ့ porn porn သုံးစွဲသူများနှင့်ချစ်သူများစွာတို့၏အတွေ့အကြုံအတွက်အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရှင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအဆက်မပြတ်ပိုမိုပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုမှတင်းမာမှုကိုဖော်ပြရန်။ အကယ်၍ သူတို့၏အရသာများသည်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများဖြစ်ပါကသူတို့သည်သူတို့၏ပြီးပြည့်စုံသော“ fit” ကိုအလျင်အမြန်ရှာပြီး၎င်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစွဲမြဲစွာကိုင်တွယ်လိမ့်မည်။ ယင်းအစားများစွာသောသူတို့သည်အပြုအမူနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပြောင်းအလဲများကိုနက်နက်နဲနဲမြန်ဆန်စွာအစီရင်ခံတင်ပြကြသည်။ ဖြစ်သကဲ့သို့လိင်အရသာလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသည်။ လေ့လာသူတစ် ဦး ကပြောကြားခဲ့သည်။
ငါနှစ်မျိုးစလုံး ဒီနေ့အချိန်မှာငါနဲ့အတူအိပ်နေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေဟာလိင်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်းထက်ညစ်ညမ်းတဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ပိုပြီးကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဆောင်နေကြတယ်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကအရာရာသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်နှင့်အိပ်ခဲ့သည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကသူမအပေါ်စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံလိုပါသလားဟုမေးခဲ့သည်။ ငါ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေနဲ့) ဘယ်တော့မှမပျော်ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးသူမစိတ်သက်သာရာရပုံရတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းပဲမိန်းမတွေမျှော်လင့်ထားသလိုပဲ။ ထို့အပြင်ယနေ့ခေတ်တွင်လူအများစုအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရန်အချိန်ကြာမြင့်သည်။ ကျွန်မရဲ့နောက်ဆုံးရည်းစားကသုတ်ရည်လွှတ်မှုနှောင့်နှေးတာကိုခံစားခဲ့ရပြီးသူကအရမ်းကိုညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူပါ။
နောက်ထပ်ကောင်လေးတရားမဝင် content ထဲကိုမိမိအတင်းမာမှုဖော်ပြထား:
ကျွန်မအကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်, ပုံမှန်, porn မှာရှာနေတော့တာပဲ။ အဲဒီမှာပထမဦးဆုံး ခဲ့ကြ လှပသောအမျိုးသမီးများ၊ ထို့နောက် HC ညစ်ညမ်းမှု၊ ထို့နောက်ထူးဆန်းစွာထည့်သွင်းခြင်းများ၊ transvestites များ၊ critters များ၊ ထို့နောက် hermaphrodites များ၊ ထို့နောက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် porn porn များ၊ ထို့နောက်ငယ်ရွယ်သောမော်ဒယ်လ်များနှင့်ယခုထောင် (မကြာမီသွားတော့မည်) ရှိသေးသည်။ နှစ်တွေကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုစိတ် ၀ င်စားလာပြီး“ အသစ်အဆန်း” ရှာဖွေမှုကိုပိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်။ အဆုံးကိုရောက်တော့ကွန်ပျူတာမရှာဘဲကွန်ပျူတာမှာထိုင်လို့မရဘူး။ မည်သူ့ကိုမျှထိခြင်း၊ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကိုကျူးကျော်ရန်ကျွန်ုပ်သည်အဝေးမှစဉ်းစားဖူးသည် (ကျွန်ုပ်၏ကလေးများနှင့်အခြားသူများက၎င်းကိုသက်သေပြနိုင်သည်) ။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ငါအသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းမှမသိဘဲဘယ်လိုမသိနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပဲငါမမြင်နိုင်ဘူးe ငါပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့၏။
ဦးနှောက် plasticity, စွဲလမ်းနှင့်မည်သို့ထိုကဲ့သို့သောခေတ်ရေစီးကြောင်း reverse မှတစ်ပိုကောင်းနားလည်မှုအရေးပါသောအ- စိုးရိမ်. ဖြစ်ပါသည်ကျနော်တို့အစားအမှတ်တမဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နှင့် / သို့မဟုတ်စွဲအဘို့ထိုသူတို့ကုသ၏ pedophiles ကဲ့သို့သော porn အသုံးပြုသူများကိုထောင်ချ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ morphing များ၏အန္တရာယ်၏ကျယ်ပြန့်အသိပညာပေးလည်းသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောအကူအညီကိုရှာပိုပြီးလူတွေအားပေးလိမ့်မယ်။ ဤသုံးပါးယောက်ျားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမှတ်ချက်:
အသေးအဖွဲများ - ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုတစ်ချိန်တည်းအသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်သည် ပို၍ အစွန်းရောက်သောပစ္စည်းများသို့သွားခဲ့သည်။ ငါ့အဘို့ကငယ်ရွယ်မိန်းကလေးများဖြစ်ခဲ့သည်။ အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အထိ - hentai, model, CP; ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ ငါသူတို့နှင့်အတူဘာမှလုပ်ဖို့အိပ်မက်မက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် (တူမအပါအ ၀ င်) သူတို့ကိုပတ်ဝန်းကျင်တွင်အမြဲတမ်းအဆင်မပြေသလိုခံစားခဲ့ရသည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးများနှင့်ခွဲခြားရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုဖြတ်ပြီးကတည်းကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အရသာကပိုပြီးရင့်ကျက်လာတယ်။ ငါကကြီးမားသော boob များရှိသောအမျိုးသမီးများကိုကြည့်ပြီး 'Meh ကြီးလွန်းသည်' ဟုတွေးခဲ့သည်။ ငါမိန်းကလေးငယ်တစ် ဦး ကိုကြည့်ပြီးသူမကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုယူမှတ်သည်ကတည်းကသီတင်းပတ်များစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ TL; DR: အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ephebophilia / pedophilia ကိုပြုပြင်ရန်ကူညီနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်
Feet - တဖြည်းဖြည်းခြေလျင် ၀ တ်စုံဝတ်ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းဖြစ်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုမဖြေရှင်းနိုင်တော့ဘူး။ ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲဆိုတာမင်းမသိဘူး။ အဲဒီနောက်ငါတစ်လခွဲလောက်ညစ်ညမ်းတဲ့ပုံကိုမကြည့်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်သွားတယ်။ ၆ ပတ်ကြာပြီးနောက်ငါသည်ခိုင်မာသောစိုက်ထူမှုများကိုနှိုးထခဲ့သည်။ လိင်သည်ယခင်ခေတ်ကကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
Femdom - ငါပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဟာလိင်တူချစ်သူကောင်လေးကိုကြက်ကလှည့်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဆင်တူတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ femdom fetish ကသာဖွင့်ဖို့ကြိုးဝိုင်းကြိုးကွေးနေတယ်၊ ​​မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့လိင်ကိုတန်ဖိုးမထားနိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ခက်ထန်စွာကြိုးတပ်ထားသည်ဟုထင်မိသော fetish သည်ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုခြင်းအလေ့အထ၏ရလဒ်သာဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ ဒါဟာငါ့ကိုယ်ပိုင်ချမှတ်ခြင်း၏ငရဲဖြစ်ခဲ့သည်။ အခု ၉၁ ရက်မှာညစ်ညမ်းမှု၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမခံရတော့ဘူး၊ ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာမိန်းကလေး ၃ ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တယ်။ ဤနောက်ဆုံးလိင်မှုဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုကိုများစွာတိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် reboot ဖြစ်စဉ်၏ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ကကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည့်သံသယကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။
“ ငါတို့၏လိင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုများအပေါ်ငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်သည်” ဟူသောအကျွမ်းတဝင်သတင်းစကားသည်အန္တရာယ်များသောသတင်းဖြစ်သည်။ တစ်ချက်အနေဖြင့်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်ရင်းလိင်လမ်းကြောင်းကိုမပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့်အစောပိုင်းကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ / ကလေးသူငယ်လိင်သည်အပြစ်ကင်းစင်ကြောင်းမသိမသာဆိုလိုသည်။ ဤသည်မှာမည်မျှဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်၊ အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု၏အဓိကပြတင်းပေါက်များအတွင်း၌ ဦး နှောက်၏အလွန်အစွမ်းထက်သောပလတ်စတစ်ကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (ဒီကိုကြည့်ပါ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်အပေါ်မကြာသေးခင်စက္ကူ preference ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ post ကိုနှင့် အဘယ်ကြောင့်နေရမည်မဟုတ်ဂျော်နီစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Porn သူ Likes အကယ်. ?) အားလုံးပြီးနောက်, အထီးကြွက်အစောပိုင်းကဆွေးနွေးတင်ပြ သူတို့ရဲ့လိင်တူချင်းမိတ်ဖက်ဦးစားပေးဆုံးရှုံးခဲ့ရ မူးယစ်ဆေးနှင့်အမူအကျင့်အားဖြည့်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးမျှသာ 45 နေ့ရက်ကာလ၌။
အချို့လူများကသူတို့၏လိင်မှုကိစ္စသည်မထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အဖြစ်အပျက်များမှတစ်ဆင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးသောလမ်းညွှန်မှုများဖြင့်အေးစက်နေကြောင်းထင်ရှားသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကလေးလိင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ချေဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ဒီပုံပြင်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်:
ကယ်လီဖိုးနီးယားစိတ်ပညာကျွမ်းကျင်သူ Robert Stoller ကလူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမှန်တကယ်နာကျင်စေသည့်အမာခံ sadomasochism ကိုကျင့်သုံးသူများကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီး masochistic ပါ ၀ င်သူများသည်ကလေးငယ်များအနေဖြင့်ပြင်းထန်တဲ့ကာယပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများခံစားခဲ့ရပြီးပုံမှန်၊
တချို့ကလိင်ကိစ္စအရသာရှင်းလင်းစွာ Reversible လုပ်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ key ကိုမလိုချင်တဲ့အရသာ (ရန် climaxing) အားဖြည့်ရပ်တန့်ဖို့နှင့်မဆို related စွဲလမ်းအပြုအမူငြိမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါမလိုချင်တဲ့အရသာသုံးမျိုးမှခြောက်လ, ဆိုရမည်မှာ, ပြီးနောက်ပျောက်လည်းညှိုးနွမ်းလျှင်ဤနည်းအားဖြင့်, လူတွေကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိ။ စိတ်ရောဂါ-Norman Doidge ရေးသားခဲ့သည်:
[မလိုချင်တဲ့ porn အရသာကြုံနေရ] လူနာသည်အများဆုံးသူတို့ပြဿနာကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့ပလပ်စတစ်ကအားဖြည့်ခဲ့ကြတခါအအေးကြက်ဆင်ကိုသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့အိမ်ထောင်ဖက်မှတစ်ဖန်ပြန်လည်ဆွဲဆောင်ခဲ့နောက်ဆုံးမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤလူတို့၏အဘယ်သူမျှမစွဲလမ်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသို့မဟုတ်အလေးအနက်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာခဲ့ကြပြီးသူတို့ကိုဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါမိမိတို့ပြဿနာအာရုံခံကွန်ရက်များအားနည်းစေမယ့်ကာလအဘို့မိမိတို့ကွန်ပျူတာများ အသုံးပြု. ရပ်တန့်နှင့်ညစ်ညမ်းဘို့မိမိတို့အစာစားချင်စိတ်ပျောက်သွေ့ခြောက်လေ၏။
သင်တန်း၏ plasticity ကွဲပြားခြားနားသည်။ Doidge လျော့နည်းပလပ်စတစ်လူနာနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောရှေးရှေးခြားနား:
အသက်တာ၌နောက်ပိုင်းတွင်ဝယ်ယူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအဘို့မိမိတို့ကုသမှု [ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု] သူတို့ရဲ့အရေးပါကာလ၌, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးအစားများများအတွက်ဦးစားပေးဝယ်ယူတဲ့သူလူနာတွေအတွက်ထက်ဝေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုပြဿနာအရသာဆည်းပူးဖို့ခွင့်ပြုကြောင်း neuroplasticity ၏တူညီသောဥပဒေများကိုလည်းအသစ်များ, ကျန်းမာသန်စွမ်းသူမြားကိုဆည်းပူးရန်, အထူးကြပ်မတ်ကုသမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါသောကွောငျ့သျောလညျးပင်အချို့သောဤလူတို့၏, သူတို့ရဲ့ [နှစ်သက်သော] လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ type ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်, အေတူ, နိုငျခဲ့ကွတနှင့် အချို့ကိစ္စများတွင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဟောင်းတွေ, ဒုက္ခသူတွေကိုဆုံးရှုံးဖို့။ ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ချစ်ခြင်းအပေါ်သက်ဆိုင်ရာနေကြသည်ပင်ရှိရာတစ်ဦးအသုံးပြုခြင်းကို-It-or-ဆုံးရှုံး-ကြောင့်ဦးနှောက်, ပါပဲ။
ကုသနေတဲ့ client ကိုထွက်သရုပ်ဆောင်, porn မှတဆင့်ဖြစ်စေ, မလိုချင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာမှ climaxing ကနေရှည်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးယူခွင့်ပြုထားပြီးသည်အထိနောက်ဆုံးအကဲဖြတ်ဆိုင်းငံ့ရန်ဆန္ဒရှိ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ပေမည်။ တစ်ဦး proclivity မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများထေူလြှငျ, ထိုအခါ ဖြစ်ကောင်းလက်ခံမှုများအတွက်ကုထုံးအကူအညီနဲ့ပူဇော်, ဒါမှမဟုတ် ရာသက်ပန်စီမံခန့်ခွဲမှု.
ဆေးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်ပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကုသခြင်းသည်“ ပြန်လည်ကုစားသည့်ကုထုံး” မဟုတ်ပါ
ယခုအချိန်တွင်လူသိများသောလိင်ပညာရှင်များကလူတစ် ဦး သည်သူ၏ fetish porn အရသာ (စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြင့်မားသောအပြာညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုပြီးနောက်မှပေါ်လာသောသူများပင်) စိတ်ဆိုးလျှင်သူသည်၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမလုပ်နိုင်ပါ။ သို့မဟုတ်သူသည်“ ပြန်လည်ကုစားရေးကုထုံးတွင်ပါ ၀ င်” လိမ့်မည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ ” ကာကွယ်ပေးသည် လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ လျှော်ကြေးကုထုံးအနေဖြင့်ဒဏ်ငွေရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ပိုအပေါ်ယံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာနှင့်အတူလိင်စိတ်တိမ်းညွတ် conflating ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာမှီအောင်လိုက်မှသိက္ခာမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောမကြာခဏအခြေခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ဖို့မပိုကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ပြီးသားဆွေးနွေးအထီးကြွက်များတွင်လိင်တူချင်းမိတ်ဖက်ဦးစားပေးသွေးဆောင်အဆိုပါကူးပြောင်းရေးကာလ, dopamine-agonist သည်းခံကြ၏။
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာ“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအားလုံးသည်ပင်ကိုသဘာဝ” ဖြစ်သည်ဟူသောအယူဝါဒသည်မည်သူမျှ ပြောင်းလဲ၍ မရနိုင်သောမှားယွင်းမှားယွင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် မည်သည့် မိမိအ core ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာမှ irreparable ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမပါဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ။ ဒါဟာအစရှိလျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာသောကျယ်ပြန့်ယုံကြည်ချက်မှဦးဆောင် do morph, သူတို့တစ် ဦး တည်းသာ ဦး တည်ရွေ့လျားရမည်ဖြစ်သည်: တ ဦး တည်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာ alignment ကိုနှင့် "အနက်ရှိုင်းဆုံးတိုက်တွန်းမှုများ။ " ဆိုလိုသည်မှာလူတစ် ဦး ၏လိင်မှုဆိုင်ရာအရသာများစတင်ပြောင်းလဲလာပါကတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုသည် (အချို့ကိစ္စရပ်များတွင်စွဲလမ်းမှု) သို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ဆက်၍ လှည့်ဖျားသွားရန်ဖြစ်သည်။
ငါတို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းအရိုးစွဲနေသောလိင်အရသာများသည်မကြာခဏဖြစ်ပေါ်စေသည် တင်းမာမှုလျှော့ချ (သည်းခံစိတ်) ပြည့်စုံခြင်းထက်။ ခေတ်သစ်လိင်ပညာရှင်ဖခင်အဲန်ဖရက်စီ။
Kinsey သည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝ၌သာမကသူ၏သုတေသနတွင်လိင်နှင့်ချဉ်းကပ်နေသည့်အရာ၌စိတ်ပျက်စရာတစ်ခုရှိသည်။ ထိုဒေသနှစ်ခုလုံးတွင်သူသည်စွန့်စားရမှုနှင့်စွဲလမ်းနေသောအမျိုးသားတစ် ဦး ကဲ့သို့ ပို၍ အနိုင်ကျင့်ခံရသည်။ မိမိအထပ်ခိုး [သူ၏အထီးချစ်သူများနှင့်အတူ sadomasochistic လုပ်ရပ်များ] အတွက်လိင် escapades နိုင်ငံရေးဒိုင်းနမစ်ခဲ့ကြသည်။ ... သို့သော်သူသည်ဤအစည်းအဝေးများအားစီစဉ်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ရုံမျှမကအမြင်အာရုံဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတစ်ခု ဖန်တီး၍ အန္တရာယ်ကိုပိုဆိုးစေခဲ့သည်။ (အတ်ထုပ်ပတ်တိ: အဲဖရက် C. Kinsey ) JH ဂျုံးစ်အားဖြင့်
Kinsey ကိုယ်တိုင်သူ၏အတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ ဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
အလွန်ကြီးစွာသောသတိထားစောငျ့ရှောကျဖို့သင့် sadomasochistic မိတ်ဆွေများကိုပြောပြပါ။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်လျင်မြန်စွာညှိနှင့်အဆင့်ဆင့်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
လိုသူ core ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာပေါ်အတွက်ပိတ်ခံခဲ့ရသည်ဟုယုံကြည်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Kinsey အစွန်းရောက်ဆွရှာကြံအခြားသူများကိုသတိပေးပြီလော မဖြစ်နိုင်ဘူး-သူ neuroplasticity နှင့်စွဲလမ်း၏ neuroscience ပေါ်တွင်မကြာသေးမီကသုတေသနပြုဆန်းစစ်, မိမိအမှုရန်၎င်း၏ဆက်စပ်မှုစဉ်းစားဖူးအထူးသဖြင့်ပါ။
ဦးနှောက် plasticity တစ်ဦးနားလည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး clients များကုသရန်အဆိုပါဆန္ဒမရှိခြင်းသူတို့ကို disempowers ။ သူတို့ဟာသူတို့ overconsumption နှင့်ကိုယ်ကိုအပေါ်သို့သူတို့ရဲ့ morphing လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာဆောင်ခဲ့ရှိမရှိရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကနေစိတ်ပျက်အားလျော့နေကြသည်။
အီဗိုလူးရှင်းလိင် (မျိုးဗီဇ၏အပေါ်သွားတာ) ကမောင်းနှင်နေသည်
သုတေသီအဖြစ် ဂျိမ်း G. အ Pfaus ထောက်ပြဒါဟာအဓိကဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အားနည်းချက်ဖြစ်ရပြီလိုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းတုံ့ပြန်မှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောတရားရှိဖို့, ကူးဖြစ်ပါသည်:
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖိအားများသည်မည်သည့်အပြုအမူ၏မဆိုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ဆုလာဘ် (နှင့်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်နိုင်သည်) နှင့်အတူအတွေ့အကြုံသည်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိုးကိုထိန်းသိမ်းသည်။ …ဤအချိုးသည်မတူညီသောပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေများ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်လျင်မြန်စွာနှင့်အခြေခံကျကျပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ရုတ်တရက်အပြောင်းအလဲများအပြီးတွင်တုန့်ပြန်ရန်သင်ယူနိုင်သူများသည် ... မသင်ယူသူများအားပြန်လည်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
Pfaus သည်နို့တိုက်သတ္တဝါများကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်သုတေသနပြုသူရွေးချယ်သည့်ရနံ့၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် (ယိုယွင်းနေသောအမွှေးရနံ့များ) ကိုသာတည်ရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများလေလေအာရုံကြောဝါယာကြိုးများပိုမိုအားကောင်းလေလေဖြစ်သည်။
Lalumièreနှင့် Quinsey (1998) အလွန်အမင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်နှိုးဆွသောသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုနှင့်အတူတွဲခဲ့တဲ့အတန်အသင့်ဆွဲဆောင်မှု, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဝတ်လစ်စလစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ရုပ်ပုံမှလိင်ကွဲအမျိုးသားများတွင်သိသာထင်ရှားသော conditional လိင်အင်္ဂါ arousal သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ (ဗီဒီယိုမပါဘဲ) တစ်ဦးတည်းပုံမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းတစ်ဦးကထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စု [အစား] လေ့ပြသခဲ့သည်။
တစ်နည်းပြောရရင်တော့, Playboy ဖျော်ဖြေရေးဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်; အမာခံဗီဒီယိုကဦးနှောက်-လေ့ကျင့်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ဤဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးမှဦးဆောင် စွဲ-related အပြောင်းအလဲများ ကြောင်း willpower တိုက်စားခြင်းနှင့်တစ်ဦးအမူအကျင့်ထပ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး destine-သူက likes မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့မဟုတ်သူ၏အခြေခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတျထဲကနေပေါ်ပေါက်နေသောကြောင့်-ဒါပေမယ့်သူ့ ဦး နှောက်မှာထိုကဲ့သို့သော "အဖိုးတန်" ဆုတွေအတွက် Hyper-sensitized လမ်းကြောင်းတွေရှိနေလို့ပါ။ (ထိတွေ့ခြင်းကုထုံးသည်အလုပ်မလုပ်နိုင်သော်လည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မည့်အစားသူသည်စိုက်ထူခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်-အရှင်ကသူ့ဦးနှောက်ထဲမှာမလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းခိုင်ခံ့စေ။ )
ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်လွယ်ကူထဲသို့ကျဖို့တွေ့ကြောင့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်, ပြဿနာ၌လိမ်း နာတာရှည် overconsumption ဖြည့်စွက်၏မျက်နှာသာအတွက် superstimulating ဆွဲဆောင်အားခုခံတွန်းလှန်ရန်မထက်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်အကန့်အသတ်မရှိရှိနေသေးသည်။ သူတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်၊ စွဲလမ်းသူတွေကဘယ်တော့မှပြန်ကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး။ (သူတို့ကမကြာခဏလုပ်ပါ။ )
လူ့စိတ်၏လိင်မှုဆိုင်ရာအပေါ်နားလည်မှုသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကစိတ်ဓာတ်တက်ကြွသူများ၊ အမျိုးသမီးရေးဝါဒီများနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုမတူကွဲပြားသောစိတ်အားထက်သန်မှုများကြားတွင်အမြဲတစေအငြင်းပွားမှုများကြောင့်ပုံပျက်နေသည်။ သူတို့၏ဆူညံသံကကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ကိုအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုသွေဖည်စေသည်-နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုများ။ plasticity နှင့်အေးစက်သောလူသားမြားအတွက်လည်ပတ်ပုံကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ဦးနားလည်မှုဟာထုတ်ဖေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အကဲဆတ်ခြင်းအန္တရာယ်များ မှ နှစ်ခုလုံး ဖိနှိပ်မှုများနှင့် overconsumption ။
မကြာသေးမီကသိပ္ပံပညာနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအရသာများကိုပြောင်းပြန်လုပ်ခြင်းအတွက်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့ဖူးသောအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သောအတွေ့အကြုံများကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်သည်၎င်း၏လိင်မှုကိုအမှန်တကယ်သိပ္ပံနည်းကျရှုထောင့်မှသဘောပေါက်ရန်နောက်ဆုံးတွင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ “ ငါရွေးချယ်ထားသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှတ်အသားကိုအမြဲသက်သေပြသည်”
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှင့်လူတို့၏တကယ့်အတွေ့အကြုံများ (ယနေ့နှင့်သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး) ကကျွန်ုပ်တို့အများစုကိုပြသသည် do အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မပါဘဲဆိုသော်ငြားမကြာခဏ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအခြေအနေ။ မဟုတ်သလို plasticity ပိုပြီးအစွန်းရောက်၏ညှနျကွားထဲမှာတစ်လမ်းလမ်းဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုအရေး။
အာရုံကြောသိပ္ပံသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလူသားတို့၏လိင်ဆန္ဒဆန္ဒ၏လွတ်လပ်မှုကိုအမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ခိုင်မာသောဘုံသဘောတရားကိုပေးနိုင်သည်။ မြင့်မြတ်သောနွားမကို“ မပြောင်းလဲနိုင်သောလိင်အရသာများ” နှင့်တွယ်ကပ်နိုင်ရန်အထောက်အထားများကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသည်ပညာမဲ့ရာကျသည်။
(မှတ်ချက်: ဒီ post ကိုပုဖြစ်ပါသည် Seltzer ရဲ့စီးရီးမှပြန်ကြားချက်၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်း on တစ်ဦးကဘီလီယံဆိုး Thoughts.)
လူသည်အရှက်ကွဲခြင်း-အခမဲ့, ဦးနှောက်-retraining ချဉ်းကပ် အသုံးပြု. ရေရှည် fetish ၏သွားကြကုန်အံ့မည်သို့အကောင်းဆုံး Self-အစီရင်ခံစာ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက်နျ Classical ကိုက်၏အခန်းက္ပ: တစ်ဦးကရှေ့ပြေးလေ့လာ
အင်္ဂါနေ့, 01 / 15 / 2013 အပေါ် radoA အားဖြင့် Submitted
ငါဒီနေရာကိုသာမှတ်ပုံတင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီ site ကိုအချိန်အတော်ကြာသိပြီးဒီဆောင်းပါးရဲ့ဆောင်းပါးတွေ၊ အသင်း ၀ င်တွေရဲ့မှတ်ချက်တွေသာမကစိတ်ပညာ - ဒီနေ့မှာပါ။ မင်းရဲ့အလုပ်ဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိပြီးအသုံးဝင်တယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအချက်အလက်တွေကိုလူတွေကို၊ အထူးသဖြင့်လူငယ်မျိုးဆက်တွေဆီရောက်ဖို့တကယ်လိုအပ်တယ်။
morphing အရသာနှင့်ပတ်သက်သောဆောင်းပါးများကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းခဲ့ရာ (ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရသော) မှာ -
ဘယ်လိုကြောင့်အများဆုံးမိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူများအပေမယ့်လာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအတွက်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲမှုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းနှင့် ပို. ပို. လေးလံသောပစ္စည်းမှအရှိန်မြင့်လာတယ်, ကွဲပြားခြားနားသော peolple fetishes အမျိုးမျိုးအဘို့အသွား?
ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောလွှမ်းမိုးမှုအခန်းကဏ္ plays ရှိသော်လည်းညစ်ညမ်းမှုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်နေသည်ဆိုသော်အချို့သောအမျိုးအစားများကိုလူအများကအာရုံစူးစိုက်လာစေရန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အချို့ရှိသင့်သည်ဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်အချို့လူများကငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးများနှင့်အတူဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အခြားသူများက bdsm နှင့်ဆက်စပ်သောအရာများသို့ကူးပြောင်းသွားတာလဲ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရအမျိုးသမီးတွေရဲ့အစွန်းရောက်ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးသွားကြည့်တာဘယ်လောက်ပဲညစ်ညမ်းပါစေကလေးငယ်တွေ (သို့) အ ၀ လွန်အမျိုးသမီးတွေ (ဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်မပြုခြင်း) ကိုဘယ်တော့မှမစဉ်းစားနိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီအရာတွေကငါ့ကိုနည်းနည်းလေးမှမဖွင့်ဘူး။
ထိုအရသာများသည်မည်သည့်နေရာမှမပေါ်ထွက်လာပါ (သို့မဟုတ်ဤကိစ္စတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းမှ) မဟုတ်ဘဲသူတို့သည်တစ် ဦး ချင်း၏ပင်ကိုစရိုက်ကိုထင်ဟပ်စေသည်ဟူသောအငြင်းပွားမှုကိုမျက်နှာသာပေးသည်မဟုတ်ပါလား။ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုရှင်းပြနိုင်သလဲ
အင်္ဂါနေ့, 01 / 15 / 2013 အပေါ်ဖြေကြား
လူ့လိင်သည်ကျွမ်းကျင်သူများသဘောပေါက်သည်ထက် ပို၍ အခြေအနေရှိသည်။ အသင်းအဖွဲ့များသည်“ နက်ရှိုင်းစွာ” ချိတ်ဆက်ထားသည့် (ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခေါင်းမာမာရှိကြောင်းသက်သေပြရန်) အရေးကြီးသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာပြသနာများလည်းရှိသည်။
အချို့သည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွင်ရှိနေပြီးသတိမထားမိဘဲဖြစ်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရိုက်တာတစ်နည်းနည်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါ်ဆောင်သွားတုံ့ပြန်မှုကိုအစပျိုးလျှင်, အချို့သောအခြေခံထားကြ၏။ (စိတ်ပညာရှင် Norman Doidge ကဒီစာအုပ်ကိုသူ့စာအုပ်မှာဆွေးနွေးတယ်လို့ထင်တယ် ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်အများစုထိုနေ့မျြးအခနျးကွီးကနေ။ )
ထိုအခါအပျိုဖော်ဝင်လာအပေါင်းတို့နှင့်ခေါ်ဆောင်သွားအမှတ်တရများဆက်စပ်ပင်မသိစိတ်ဆက်စပ်နေသော, arousal တစ်ခုချင်းစီဥပမာအားဖြင့်နှင့်အတူပါဝါနှင့်အားဖြည့်ရဖို့။
ထိုအခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အလွန်မြင့်မားသော arousal ပြည်နယ်များနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များလာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာသဘာဝလွန်လှုံ့ဆော်မှုတွန်းအားပေးတဲ့ ၀ တ္ထုအသစ်ဟာတကယ်အရသာရှိတဲ့အရသာကိုစတင်နိုင်တဲ့နေရာပါ။ desensitization ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ ဦး နှောက်သည်အသစ်အဆန်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်း၊ အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသော်လည်း၊ များသောအားဖြင့် porn / porn fantasy ကိုရပ်တန့်ခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။
သငျသညျသိပ္ပံပညာကိုကြိုက်လျှင်, (လိင်တူချစ်သူ) သုတေသီတစ် ဦး အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂျာနယ်ဆောင်းပါးနောက်ပိုင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအပေါ်အေးစက်၏အဆင့်ဆင့်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခြေရာခံ။ Pfaus_Sexual_Reward_2012.pdf ဤသည်မှာအသစ်သောနယ်ပယ်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောအရသာများသည်ပင်ကိုသဘာဝပင်ဖြစ်သည်ဟုလိင်ပညာရှင်များနှင့်အခြားကုထုံးပညာရှင်အများစုနှင့်အတော်လေးလူကြိုက်များသည်။ ကာလ။ Pfaus ကြောင်းပြင်အလွယ်တကူဆုံးရှုံးတဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မဟာဗျူဟာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထောက်ပြသည်။ အောင်မြင်သောမျိုးရိုးဗီဇဖြန့်ဖြူးသူသည်အသစ်သောအရာများ / လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်။
စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: တစ်အရသာအထိကြိုးဖြစ်ပါတယ်တခါတဦးတည်းဘယ်လောက်ရွေးချယ်စရာရှိပါသလားဟုမေးခွန်းထုတ်စရာ ဒါကအများကြီးအချက်များအပေါ်မူတည်ပေမည်:
တ ဦး တည်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ ဦး နှောက် (တချို့ဟာအခြားတွေထက်ပလတ်စတစ်ပိုများတယ်)၊
ဘယ်လိုအသိစိတ်ကိုသင်လှုံ့ဆော်မှုသင်နှင့်အတူသင်၏အချိန်ဖြုန်းအကြောင်းကိုများမှာ do ဒါကြောင့်ထွက်မှ rewire ချင်ပါ။
ဦး နှောက်ကဓာတ်မြေသြဇာနဲ့ ဦး စားပေးပြီး ဦး စားပေးရမယ်။ ဒါကြောင့်သင်မဆက်သွယ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာ ဦး နှောက်များစွာဟာတခြားနေရာကိုစပြီးရှာဖွေလာကြလိမ့်မယ်။ "vanilla" တွေကိုတဖြည်းဖြည်းပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုကိုကြည့်ဖို့စတင်ပါ။ သိသာထင်ရှားတဲ့, ဒီနေ့ချင်းညချင်းဖြစ်ပျက်မထားဘူး ဦး နှောက်သည်ပလတ်စတစ်မဟုတ်၊ အရည်မဟုတ်။ လူငယ်တစ်ယောက်ကသူဘာကိုဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့သည် -
ငါဘယ်တော့မှ (သို့မဟုတ်လုံးဝနီးပါး) အောင်မြင်သောလိင်နှင့်ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ဖူးသူများသည်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်သည်။ Reboot လုပ်ခြင်း [porn / masturbation ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်း] သည်ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကိုသုတ်ပစ်ရန်အတွက် hard drive ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်တူသည်။ သို့သော်၎င်းကိုအစားထိုးရန် operating system အသစ်မရှိပါ။ ကျနော်တို့ပုံရိပ်ယောင်ကိုတုံ့ပြန်ပုံကိုမသာ, ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများနှင့်စပ်လျဉ်း၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စိတ်ခံစားမှုဘက်။ ဒီအဆင့်ရောက်ရင်သုညထက်နိမ့်တယ်၊
အချို့လူများအတွက်မူမလိုလားအပ်သောပေါင်းသင်းမှုသည်အလွန်စောလွန်းခြင်းသို့မဟုတ်စွဲလမ်းလွန်းခြင်းတို့ကြောင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအခါလက်ခံမှုနှင့်ဖြည့်ညှင်းရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သင်လိုချင်တာတွေကိုလအနည်းငယ်ကြာလမ်းပြပြီးအပြောင်းအလဲတွေဘယ်လိုဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တယ်၊ အနည်းဆုံးပညာရေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ တနည်းကား, ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိစ္စရပ်များ။ ယောက်ျားများသည်တစ်ခါတစ်ရံသူတို့တွေ့ကြုံရသောအပြောင်းအလဲများကြောင့်အံ့အားသင့်ကြသည်။
အရေးအသားခင်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိုက်ကိုဘောင်ခတ်ပြီးမပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများဖြစ်ပါသလား ငါတို့သည်လည်းရေးသားခဲ့သည် သင်ကသင့်ရဲ့ဂျွန်ဆင်ယုံကြည်နိုင်ပါသလား?သငျသညျစိတ်ဝင်စားဖို့ကိုရှာဖွေရသော။
ဒါဟာ "sensitization" နှင့် "desensitization" အကြားခြားနားချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ချေ။ ဒုတိယကအရင်ထက်မြန်သည်။ ဤသည်မှာသာမာန်လိင်ဆက်ဆံမှုသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာညှိုးနွမ်းဖို့အများကြီးပိုကြာနိုင်ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေအများကြီးရဲ့ကိုးကားချက်တွေနဲ့ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ "sensitized လမ်းကြောင်းများ" ဟာအားနည်းသွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာကိုခံစားရတဲ့အခါသူတို့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကိုပြောနေတာပါ အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား?
တစ်နည်းဆိုရသော် fetish သည်ခဏတာလည်ပတ်နေလျှင်ပင်၎င်းသည်သင်၏“ မဆုတ်မနစ်” ဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ၎င်းသည်ခေါင်းမာ။ အာရုံခံနိုင်သည့် ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အားလပ်စေရန်လများသို့မဟုတ်နှစ်နှစ်လောက်ပင်လိုအပ်လိမ့်မည်။